We Fight We Win. -- " More than Media ": သူသေသွားပြီ။ သူမိန်းမ မုဆ်ိုးမ ဘ၀ နဲ့ ကျန်ရစ်ရှာ
သူသေသွားပြီ။ သူမိန်းမ မုဆ်ိုးမ ဘ၀ နဲ့ ကျန်ရစ်ရှာ
This young Burmese army officer was killed in Kachin state war - about one month after this wedding photo was taken. He was one of 52th intake of Defence Services Academy. His name is Myo Min Thant (အပတ်စဉ် ၅၂ မှ ဗိုလ်မျိုးမင်းသန်). He was killed alongside other5officers and 42 soldiers according to Burmese military sources.
စစ်တိုက်တာ ကလေး အလုပ်မဟုတ်ပါ။ စစ်ဗိုလ်လေးများ အိမ်ကိုပြန်ကြပါ။
ဒီစစ်ဗိုလ်လေးဆိုရင် ကချင် ပြည်နယ်မှာ သေသွားပြီ။ သူမိန်းမငယ်ငယ်လေးဟာ မုဆိုးမုဖြစ်ရှာပြီ။ သင်တို့ အချိန်မနှောင်းခင်မှာ
သင့်မိခင်နဲ့ ရီးစား ဆီကို ပြန်ကြပါ။ သင်တို့ တိုက်နေတာပြည်သူတွေအတွက်မဟုတ်ပါ။
သင်တို့ မောင်များ၊ သူငယ်ချင်းများစစ်တပ်ထဲမှာရှိလျင် အိမ်ပြန်ဖို့ တိုက်တွန်းပါ။
ခင်ဗျားတို့ တချိန်မှာ ကျနော်တို့မိတ်ဆွေကောင်းပီသစွာအကြံပေးတာကို